အလုပ်လျှောက်လွှာကို ထင်ပေါ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ? -
အလုပ်လျှောက်လွှာကို ထင်ပေါ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
Posted on December 3, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar	Comment(0)
လူပဲ ထင်းနေစရာ လိုတာမဟုတ်ဘူးနော်.. အလုပ်လျှောက်လွှာလည်း ထင်းနေဖို့ လိုသေးတယ်..
ယောင်းရေးပြီး တင်လိုက်တဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာက ယောင်းကို အလုပ်ခန့်နိုင်မယ့်သူတွေရဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးမှုကို အပြီးအပိုင်ကျော်လွှားသွားစေနိုင်မယ့် သော့ချက်တစ်ခုပါ။ အလုပ်လျှောက်လွှာကောင်းတစ်ခုဟာ တိကျပြီး အချက်အလက်စုံလင်ဖို့ လိုအပ်သလို ရေးသားရာမှာလည်း ပညာသားပါဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ယောင်းအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် အချက် (၃)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ်လျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်၊ ရာထူးနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် စကားလုံးများကို ရွေးချယ်ပါ။
ယောင်းရဲ့ အရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကောင်းကောင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အသားပေးဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုပါ။ သတိပြုရမှာကတော့ ဒီလို ရေးလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ယောင်းခုလျှောက်ထားမယ့် ရာထူးကိုလည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်ေ်နစေရပါမယ်။
ဥပမာ – စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကဏ္ဍ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ” လုပ်ငန်းရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု ” ဆိုတဲ့ အချက်ကို အသာပေး ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ” အရောင်းမြှင့်တင်တဲ့နေရာမှာ အောင်မြင်တယ်” ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရေးသားမယ်ဆိုရင် ယောင်းကိုယ်ယောင်း အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သမားလို့ ဖော်ညွှန်းလိုက်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ဒါဆို လွဲပြီပေါ့… Digital Marketing နဲ့ ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းဟာ Search Engine တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> အလုပ်လျှောက်လွှာကောင်းကောင်း တစ်ခုဆိုတာ
ယောင်းလုပ်ခဲ့ဖူးသမျှ အလုပ်တိုင်းကို ပြောပြနေတာထက်စာရင် အခု လျှောက်မယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လို ထူးချွန်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ထိထိမိမိ ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ အရင်လုပ်ငန်းမှာ အမြတ်စွန်းတွေ တက်လာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာကို ဖော်ပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ငွေကြေးပမာဏ ဒါမှမဟုတ် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖော်ပြတာဟာလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
(၃) သေသပ် တိကျပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဆန်သော လျှောက်လွှာပုံစံကို အသုံးပြုပါ။
ယောင်းရဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာက ကြည့်ရသူ အမြင်ရှင်းအောင် အရင် ပုံစံချပါ။ နာမည်၊ လိပ်စာနဲ့ ပညာအရည်အချင်းတွေကို နံပါတ်တပ်ပြီး ဖော်ပြနေတာနဲ့ စာရင် ပိုအရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာကို ချရေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အရင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံက ဘာလဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့.. ဒါပေမဲ့ အရင်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကောင်းတဲ့ဘက် နည်းနည်းရောက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ထည့်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ရေးသားတဲ့ စကားလုံးပုံစံနဲ့ အရောင်ကို အရမ်း ရှုပ်ထွေးအောင် အလှမဆင်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မှင် အနက်ရောင်ကိုပဲ အသုံးပြုပါ။
Related Article >>> ဗီဒီယို Resume တစ်ခုကို ဘယ်လို ဖန်တီးကြမလဲ?
အလုပ်လျှောက်လွှာ နမူနာတွေကိုတော့ အောက်ပါ လင့်ခ်တွေကနေ တစ်ဆင့်လည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လူပဲ ထငျးနစေရာ လိုတာမဟုတျဘူးနျော.. အလုပျလြှောကျလှာလညျး ထငျးနဖေို့ လိုသေးတယျ..
ယောငျးရေးပွီး တငျလိုကျတဲ့ အလုပျလြှောကျလှာက ယောငျးကို အလုပျခနျ့နိုငျမယျ့သူတှရေဲ့ လူတှစေ့ဈဆေးမှုကို အပွီးအပိုငျကြျောလှားသှားစနေိုငျမယျ့ သော့ခကျြတဈခုပါ။ အလုပျလြှောကျလှာကောငျးတဈခုဟာ တိကပြွီး အခကျြအလကျစုံလငျဖို့ လိုအပျသလို ရေးသားရာမှာလညျး ပညာသားပါဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီတော့ လှယျကူရိုးရှငျးပွီး ယောငျးအတှကျ အသုံးဝငျစမေယျ့ အခကျြ (၃)ခကျြကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) ကိုယျလြှောကျထားတဲ့ အလုပျ၊ ရာထူးနဲ့ ကိုကျညီမယျ့ စကားလုံးမြားကို ရှေးခယျြပါ။
ယောငျးရဲ့ အရငျလုပျငနျးခှငျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှေ ကောငျးကောငျးပွနိုငျခဲ့တယျဆိုတာကို အသားပေးဖျောပွတဲ့ စကားလုံးတှကေို အသုံးပွုပါ။ သတိပွုရမှာကတော့ ဒီလို ရေးလိုကျတဲ့ စကားလုံးတှဟော ယောငျးခုလြှောကျထားမယျ့ ရာထူးကိုလညျး အထောကျအပံ့ဖွဈျေနစရေပါမယျ။
ဥပမာ – စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ကဏ်ဍ နဲ့ ပတျသကျပွီး လုပျကိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ ” လုပျငနျးရဲ့ ခြိတျဆကျမှုတှကေို တညျမွဲအောငျ ထိနျးသိမျးနိုငျမှု ” ဆိုတဲ့ အခကျြကို အသာပေး ဖျောပွသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ ” အရောငျးမွှငျ့တငျတဲ့နရောမှာ အောငျမွငျတယျ” ဆိုတဲ့ အခကျြကို ရေးသားမယျဆိုရငျ ယောငျးကိုယျယောငျး အရညျအခငျြး ပွညျ့ဝတဲ့ အရောငျးမွှငျ့တငျရေး သမားလို့ ဖျောညှနျးလိုကျရာလညျး ရောကျပါတယျ။ ဒါဆို လှဲပွီပေါ့… Digital Marketing နဲ့ ပတျသကျလာတယျဆိုရငျတော့ ယောငျးဟာ Search Engine တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး လလေ့ာဆနျးစဈမှုတှေ အမြားကွီး လုပျခဲ့တဲ့ အကွောငျး ဖျောပွနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> အလုပျလြှောကျလှာကောငျးကောငျး တဈခုဆိုတာ
ယောငျးလုပျခဲ့ဖူးသမြှ အလုပျတိုငျးကို ပွောပွနတောထကျစာရငျ အခု လြှောကျမယျ့အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ လုပျငနျးတှမှော ဘယျလို ထူးခြှနျအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တယျဆိုတာကို ထိထိမိမိ ပွောပွသငျ့ပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ အရငျလုပျငနျးမှာ အမွတျစှနျးတှေ တကျလာအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တာကို ဖျောပွခငျြတယျဆိုရငျတော့ ငှကွေေးပမာဏ ဒါမှမဟုတျ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ဖျောပွတာဟာလညျး နညျးလမျးကောငျးတဈခုပါပဲ။
ယောငျးရဲ့ အလုပျလြှောကျလှာက ကွညျ့ရသူ အမွငျရှငျးအောငျ အရငျ ပုံစံခပြါ။ နာမညျ၊ လိပျစာနဲ့ ပညာအရညျအခငျြးတှကေို နံပါတျတပျပွီး ဖျောပွနတောနဲ့ စာရငျ ပိုအရေးကွီးတဲ့ အကွောငျးအရာကို ခရြေးပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အရငျလုပျငနျးအတှအေ့ကွုံက ဘာလဲ ဆိုတာမြိုးပေါ့.. ဒါပမေဲ့ အရငျလုပျငနျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး မကောငျးတဲ့ဘကျ နညျးနညျးရောကျတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှေ ထညျ့ခွငျးကို ရှောငျပါ။ ရေးသားတဲ့ စကားလုံးပုံစံနဲ့ အရောငျကို အရမျး ရှုပျထှေးအောငျ အလှမဆငျပါနဲ့။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ မှငျ အနကျရောငျကိုပဲ အသုံးပွုပါ။
Related Article >>> ဗီဒီယို Resume တဈခုကို ဘယျလို ဖနျတီးကွမလဲ?
အလုပျလြှောကျလှာ နမူနာတှကေိုတော့ အောကျပါ လငျ့ချတှကေနေ တဈဆငျ့လညျး လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Tagged Career, Job, Make, Plan, Resume, Stand Out
အတွေ့အကြုံမရှိဘဲ အလုပ်ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခု
Posted on March 4, 2019 March 4, 2019 Author Stella
အလုပ်လုပ်ချင်ပေမဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိသေးလို့ အခက်တွေ့နေတဲ့ ယောင်းတွေအတွက်
လူမှုကွန်ရက်တွေကို အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လို အသုံးချကြမလဲ?
Posted on January 14, 2019 January 14, 2019 Author For Her Myanmar
တစ်နေ့တစ်နေ့ Newsfeed ကို အပေါ်အောက် ဆွဲနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေကြပြီလား?
Job Description of Content Writer – Food
Posted on March 23, 2018 March 25, 2018 Author Nilar
Position: Content Writer – Food
အသည်းကွဲခြင်းက ပေးနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာ (၄)ခု
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း -၁ )